उल्लिखित घटना एकै दिनका जस्तै समाचार हुन् । त्योभन्दा पहिले दैनिक रूपमै आउने समाचार पनि छन् । कतै बोक्सीको आरोपमा कुटेर मृत्यु, कतै दाइजोको निहुँमा जलाएर मृत्यु त कतै लागु औषधका निहुँमा झगडा हँुदा मृत्यु आदि सबै आ–आफ्नै प्रकारका मुत्यु हुन् ।माथि उल्लिखित जस्तोसुकै मृत्यु भए पनि त्यहाँ कसैको काख रित्तिएकै हुन्छ । कसैको अभिभावक खोसिएकै हुन्छ वा कसैको सिन्दुर पुछिएकै हुन्छ । तर नेपाली समाजको विश्लेषणमा कुनै मृत्यु स्वाभाविक लाग्छ, सामान्यीकृत हुन्छ, अनि, समाचार छापिनु वा प्रसारित भएसँगै विलीन हुन्छ ।
बोहोरागाउँ, सप्तरी र कञ्चनपुर—यी बिल्कुलै फरक प्रकृतिका घटना र फरक प्रकृतिका मृत्यु हुन् तर जसको परिवारमा घटित हुन्छ, त्यसको पीडा लाग्छ, बराबरै हुन्छ । तर समाजले ग्रहण फरक फरक तरिकाले गर्दछ, साथै मृत्यु निर्दोषको हुन्छ र आज पनि त्यही भएको छ । कञ्चनपुरका गौतम दोषी होइनन्, सप्तरीका मण्डल दोषी होइनन्, न त बोहोरागाउँमा मृत्युवरण गर्ने दोषी हुन् । यदि दोषी हो भने त्यो हो– हाम्रो देशको राजनीति र यसको नेतृत्व । हाम्रो राजनीति र राजनीतिकर्ता यस्ता भए न त उनलाई लाज लाग्छ, न त घृणा लाग्छ, न जिम्मेवारी लिनु पर्छ, न जबाफदेही बन्नु पर्छ । यसैको परिणामतः नागरिक हत्याको बेवास्ता हुन्छ । सप्तरी र कञ्चनपुर मात्र होइन, बोहोरागाउँको मृत्यु पनि मृत्यु होइन, हत्या नै होभन्दा फरक पर्दैन ।
हाम्रो देशमा सीमा अतिक्रमण भयो, जङ्गे पिलर हराए भन्ने लगायतका समाचार नौला होइनन् । कैयौँ वर्षदेखि यिनै राजनीतिक दल र नेताले हजारौँ पटक सीमा रक्षा तथा व्यवस्थापन हामी गर्छौं भन्दै ध्वनि प्रदूषण गर्दै खुल्ला मञ्चमा कुर्लिएर गुञ्जायमान भएकै हो । जनमत आफूतिर आकर्षण गर्दै सत्ताको भर्‍याङ नचढेका सायदै कमै होलान् । चाहे सुरुङ युद्धसम्मका कल्पना गर्ने कम्युनिस्टइतर होउन् या काङ्ग्रेसइतरका, जसले कैयौँ वर्षदेखि यो देशको शासन सत्ताको हालीमुहाली गरे र गर्दैछन्् । यिनकै शासन कालमा सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ भन्छन्– सीमा रक्षक सशस्त्र प्रहरी बललाई नै नेपालको सीमानाका बारेमा जानकारी छैन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थाहा छैन । कहिले सुस्ता र कालापानी त कहिले लिग्बिया ब्युराका कुरा गरेर निकै राष्ट्रवादी बनेर यिनकै भर्‍याङ चढेर सत्ता पुगेकाहरूबाटै ठुला धोका भएका छन् । नेपालमा गणतन्त्र आएकै पनि दशकौँ भई सकेको छ र यो लामो समय हो, शीर्षस्थ नेतृत्वले कहिल्यै पनि सत्ताको लोभमा भारतीय पक्षसँग उच्च तहमा हाम्रा सीमा व्यवस्थापन तथा सीमाङ्कनका कुरा समेत उठाउन चाहेनन् । सत्ताको अन्ध तृष्णाले स्वाभिमान गुमाई सकेको हाम्रो राजनीतिक दलले राष्ट्र र राष्ट्रियता सत्ताको मोलमोलाइका लागि अर्कैको वलीमा चढाइएको गौतम जस्ता देशभक्तले गोली खाई ज्यान गुमाएका छन् । देशभक्त आम नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट लागेको छ, मन भतभती पोलेको छ, नशा–नशामा प्रतिशोधको ज्वाला दन्किएको छ । चोक–चोकमा विरोध र्‍याली निस्किए । सत्तासिनका लागि देशवासीका नाममा एउटा सन्देश दिन पनि आवश्यक महशुस भएको छैन । गौतम जस्तै अब देशको सीमा रक्षाको जिम्मा फेरि पनि नेपाली जनताको काँधमा आएको छ । गौतमको सहादतले बलिदानीको भावना झनै उच्च भएको छ । आफ्नो देशको सीमा रक्षा गर्न नेपाली काबिल छन्, जुन वर्तमान र इतिहासमा प्रमाणित भई सकेको छ र यो मृत्यु आम नेपालीको मनमा उच्च सम्मानका साथ रहने छ । यो मृत्यु समाचार मात्र नभई हाम्रो राजनीतिक अकर्मण्यताको पराकाष्ठाको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने छ । गौतम दोषी करार हुने छैनन् । भारतीय ज्यादती विरुद्ध जनता एक ठाउँमा लामबद्ध हुनेछन् । एउटा गल्लीको कुकुर समेत पल्लो गल्लीमा पुग्दा त्यहाँका कुकुरले प्रतिकार गर्न पुग्दछन् र आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्छन् भने हामी त चेतना भएको सचेतना सहितको नेपाली नागरिक हौँ । अब हाम्रो राजनीतिकर्ताले बुझ्नु पर्दछ । नेपालीको स्वाभिमानको उच्च सम्मान हुनुपर्दछ ।
राजनीतिक सङ्क्रमणकै कारण सप्तरीमा नेपाली पुत्रले नेपालीकै गोली खाएर मृत्युवरण गरे । यो ठुलो विषय बन्यो र ठुलो विषय पनि हो । कसैको ज्यान लिने अधिकार कसैलाई छैन तर प्रजातन्त्रमा निषेधको राजनीति स्वीकार्य हुँदैन । दलीय तथा व्यक्तिगत आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न सर्व साधारण जनतालाई मोहरा बनाउने निकृष्ट राजनीतिको अन्त्य हुनु पर्छ । सप्तरीका मधेशी दाजुभाइको मृत्यु हँुदा हुने पीडा सबैलाई समान नै हुन्छ तर मृत्यु केका लागि हो ? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण जनता सामु व्यापक प्रस्तुतीकरण गर्ने नीति लोकतान्त्रिक सर्वमान्य पक्ष हो । तर, राजनीतिक दाउपेच राखि कूटनीतिक काइदाबाट राज्यले कसैमाथि गोली बर्साउन बाध्य पार्नु वा गोली थाप्न बाध्य पार्नु दुवै बेइमानी तथा निकृष्ट राजनीतिक प्रवृत्ति हो । कसैको काख रित्याउनु, अभिभावकत्व खोस्नु वा सिन्दुर पुछ्नु मात्र राजनीति होइन । प्रजातन्त्रमा संवाद, बहस र छलफल निकासका लागि प्रमुख कारक बन्छन् । संवाद र छलफलबाटै जनाकाङ्क्षा, चाहना र सपना पुरा हुने वातावरणको निर्माण गरिनु पर्दछ । ओठमा मुस्कान, आँखामा सपना र मनमा शान्तिका साथै न्यानो वातावरणको निर्माण राजनीतिको मर्म हो । यसैबाट समृद्ध राष्ट्रको निर्माण हुन्छ । यसको जबाफदेहिता राज्य वा सरकार हुनुपर्दछ र जिम्मेवारी पनि लिनु पर्दछ । कसैले कसैमाथि दोषारोपण गर्दैमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कसैको जीवनको मूल्य पैसा हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन, जुन कुरा हाम्रो राजनीति तथा राजनीतिकर्मीले बुझ्नै पर्दछ । जनताको अदालत कठोर हुने छ । त्यसको क्षतिपूर्ति रूपैयामा भुक्तानी हुन नसकिने हुन्छ ।
कञ्चनपुरको घटना वा सप्तरीको हत्याकाण्डभन्दा पनि आतङ्कपूर्ण घटना बोहोरागाउँ हत्याकाण्ड हो । यसलाई किन हत्याकाण्ड भनिएको हो ? एउटा सामान्य, निर्दोष र असंलग्न नागरिकलाई एम्बुसमा पारेर मारिएभन्दा कम दर्दनाक छैन यो घटना । आफूले उचित भाडा तिरेर सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्न पाउने नागरिकको अधिकार हो । नागरिकको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षा निकायहरू तथा जनताको जीवनैमाथि खेलवाड गर्नु उपयुक्त होइन, न कि धनी हुन चाहने एम्बुस सञ्चालक व्यवसायी र सडक अनुमति दिने राज्यको सम्बन्धित निकाय यो हत्याकाण्डका मतियार हुन । सप्तरी होस् वा बुटवल काण्ड, सबैमा राजनीतिक रङ दिएर सहिद घोषणा गर्नेदेखि लिएर नेपाल बन्दसम्मका बिरोध तथा असुरक्षा र जीवन रक्षाको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन हुन्छन् । त्यहींँ राज्यले एकै ठाउँमा बिसौँ, तिसौँ जनताको एउटै चिहान हँुदा समेत समाचारमा दुर्घटनाको रङ दिएर मृत्युलाई सामान्यीकृत गरिन्छ । दुर्घटना एक पटक हुन्छ, बारम्बार नाटक हुन्छ । काभ्रेको घटनालाई दुर्घटना भन्ने कि रामेछापको वा बोहोरागाउँको ? यसरी ट्राफिक प्रहरीबाट गरिने जरिवाना अथवा ब्यवसायीको २–४ हजार आर्थिक नाफाका लागि पचासौँ निर्दोष नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसले दियो ? या त सडक दुर्घटनामा मारिने जीवन सस्तो, बुटवल वा सप्तरीमा मारिनेको जीवन महङ्गो हुन्छ ? किनभने बुटवल वा सप्तरीमा मारिने राजनीतिकर्मी थिए भने बोहोरागाउँमा मारिने सामान्य नागरिक थिए ? के जीवन सस्तो हुन्छ र ? खोई राज्यको जबाफदेहिता ? सप्तरी घटनामा विज्ञप्ती निकाल्ने नागरिक समाज होस् या मानव अधिकारकर्मी, खोई बोहोरागाउँमा जीवन गुमाउनेहरूको बाँच्न पाउने अधिकार ? यस प्रकारका बारम्बार घटाइने घटनालाई फेरी पनि एउटा सामान्य दुर्घटनाको सङ्ज्ञा दिएर बेवास्ता गर्दै जाने हो ? जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । यसरी समान प्रकारका मृत्युलाई विभेद गरेर कसैलाई सरलीकृत गर्दै लगेर सामान्यीकरण गर्ने र कसैलाई दलाली (बार्गेनिङ) को माध्यम बनाएर सत्ताका लागि र्‍याल चुहाउने यस प्रकारको राजनीतिको अन्त्य हुनु पर्छ ।
राज्यले सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । त्यसैले कसैको जीवन दिन नसक्ने राज्य वा राजनीतिक दल वा कार्यकर्ता सबैको जीवन अमूल्य हुन्छ भन्ने कुरा बुझेकै हुनुपर्दछ । मृत्युलाई पैसाको मूल्य दिइनु सरासर अपराध भएकाले यसतर्फ राज्य र राजनीतिक दलले सचेततापूर्वक कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।